eNasha.com - अमेरिकीसँगको प्रेमकथा
प्रस्तुतिः अच्युत कोइराला
म यहाँबाट एउटा साथीसँग गएको थिएँ । उहाँको परिवार कोलोराडोमा हुनुहुन्थ्यो । केही साता बसेपछि मलाई लाग्यो, अब आफैँ केही गर्नुपर्छ । त्यही भएर मैले पहिला रेष्टुराँमा काम गरेँ । त्यसपछि न्यूयोर्क गएँ, तर मलाई भीडले गर्दा मन परेन । शान्त ठाउँको खोजीमा म मेरील्याण्ड आएँ । आइसक्रिम, फास्टफूडमा काम गरेँ ।
म त्यहाँ लङ आवर काम गर्थेँ, बिहानदेखि राति अबेरसम्म । सोमबार शिवजीको ब्रत लिने हुनाले मैले त्यो दिन छुट्टि लिने गर्दथेँ । त्यहाँ एउटा अग्लो मान्छे सधैँ लन्च लिन आउँथ्यो । अरु चाहिँ खाने बित्तिकै जान्थे, ऊ चाहिँ समय हुञ्जेल त्यहीँ बसिरहन्थ्यो । उसले एक दिन मलाई मेरो नाम सोध्यो, मैले बताएँ । एक कदमअगाडि बढेर उसले मेरो घरको फोन नम्बर लिन्छु भन्यो । मैले पनि नम्बरै दिँदा त के फरक पर्ला भनेर दिएँ । कहिलेकाहीँ उसले घरमा फोन गर्दथ्यो अनि कहिलेकाहीँ रेष्टुराँमा भेट भइरहन्थ्यो ।
एक दिन मैले शनिबार नै बिदा लिनुपर्ने भयो । शनिबार किन भने त्यो बेला हाम्रो वैशाख १ गते पर्ने थियो र त्यसबेला एउटा सांगीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने भएकाले बिदा लिनु आवश्यक भयो । त्यो मान्छेसँग कुरा हुँदै गर्दा मेरो मुखबाट फुत्कियो- "आम् अफ् टुमरो ।" उसले भन्यो- "आम् सपोज टु टेक अफ मन्डे ।" नयाँ वर्षमा मैले एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ । मेरो नृत्यको कार्यक्रम छ भनेँ । उसले आफूलाई लैजान कर गर्यो । मैले पनि के फरक पर्ला र, भनेर लिएर गएँ ।मेरो नृत्य हेर्नका लागि मात्र चार घण्टा कुर्नु पर्यो । ताली मात्र बुझ्ने अरु केही नबुझ्ने हुनाले उसको यात्रा खासमा तालीका लागि मात्र भयो । कार्यक्रमको अन्तिममा मेरो नृत्य राख्ने गरिन्थ्यो । मेरो नाम आउने बित्तिकै उसको कान ठाडो भयो । त्यहाँ वरपरका मान्छेहरुले कुरा गरेछन्- नेपालकी एक्ट्रेस सारंगा श्रेष्ठ ।
त्यो मान्छे अरु कोही नभएर रेजिनल हेरिसन हुनुहुन्थ्यो । म उहाँलाई रेजी भन्ने गर्छु कार्यक्रम सकिएपछि उहाँले आर्श्चर्य व्यक्त गर्नुभयो- "तैँले आजसम्म किन मलाई नबताएकी ?" "किन बताउनु ? म पर्दामा एक्सन कट गर्थें, आज वास्तविक जीवनको एक्सन कट गर्दैछु," मैले रुखो उत्तर दिएकी थिएँ । मैले अमेरिका आउनुअघि नेपालको राजपरिवारको सामूहिक नरसंहार, सिनेमाको घट्दो व्यवसाय र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउने स्थिति सबै बताएँ । रेजी गम्भीर हुनुभयो । मलाई उहाँले निकै मिहिनेती पाउनु भयो रे ! त्यसपछि इम्प्रेस हुनुभयो रे !
एक दिन ब्रेकको बेला उहाँ आउनु भयो र एक्कासी भन्नुभयो- "हृवाइ डु यु वर्क हार्ड ? हृवाइ डन्ट यु ट्राइ समथिङ् एल्स ?" मिहिनेत त गर्नु नै छ । तर कस्तो काम खोज्नु अर्को ? मैले उहाँलाई प्रश्नसूचक अनुहारले हेरेँ । उहाँले फेरि भन्नुभयो- "यु वाना चेन्ज योर लाइफ ?" उहाँको प्रश्नले मेरो अनुहारको रंग नै परिवर्तन भयो क्यार ! उहाँले ठीकै छ भन्नुभयो र निस्कनु भयो । एउटा सुखदुःख साटासाट गर्ने साथी हुँदै थियौँ हामी। तर यो जिन्दगी परिवर्तन गर्न चाहन्छ्यौ ? भन्ने उहाँको प्रश्नले मलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनायो, यो मान्छे मबाट के चाहन्छ ? किन मेरो पछि लागिरहेको छ ? तर सही के हो भने मलाई उसको व्यवहार चाहिँ मन पर्न थालेको थियो ।
एक महिनापछि न्यूयोर्कबाट अनु थापा दिदीले एउटा सांगीतिक कार्यक्रमको निमन्त्रणा दिनुभयो । कहाँ गएर नाचुँ भन्ने भइरहेको बेला त्यहाँबाट निम्ता आयो । तर उहाँ त त्यहाँ पनि जान्छु भन्नुहुन्छ । नेपालीको समूहमा एउटा अमेरिकीलाई लिएर कहाँ जाऊ ? ज्यादै अप्ठेरो भयो तर आयोजकलाई चाहिँ भनेँ, "मलाई मन पर्छ, ऊ पनि आउँछु भन्दैछ के गरौँ ?" उहाँले सजिलो गरी लिनुभयो र उसलाई घरमै राख्ने योजना बनाएँ । तर रेजीले त आफ्नो लागि होटल बुक गरेर सबैथोक गरिसक्नु भएछ ! त्यसपछि हामी न्यूयोर्क गयौँ, रातिको कार्यक्रम हामी दिउँसो नै पुगेकाले घुम्ने समय प्रशस्त थियो । उहाँले सेन्ट्रल पार्क घुम्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हुन त म पहिले नै त्यहाँ घुमिसकेकी थिएँ, उहाँले नघुमेका कारण मैले हुन्छ भनेँ । त्यहीँ उहाँले सबै मान्छेको अघिल्तिर मसँग बिहेको प्रस्ताव राख्नुभयो । पहिले त म चकित भएँ, तर यत्रो महिनाको संगतपछि उहाँलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण देखिनँ । त्यसपछि हाम्रो न्यूयोर्कमा सानोतिनो कार्यक्रमबीच बिहे भयो ।
मलाई उहाँको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको व्यवहार नै हो । कुनै कुरामा पनि उहाँले जबरजस्ती गर्नुहुन्न । अरुको कुरालाई महत्व दिने हुनाले शायद म उहाँप्रति छोटो समयमा नै यति खुलस्त, नजिकको महसूस गर्न पाएकी हुँ । र, मलाई उहाँलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ भने मान्छेको भाग्य भनेको अचम्मकै हुँदोरहेछ ! उहाँ कहाँको अनि म कहाँकी ! तर समयले हामीलाई भेट गरायो र आज एउटा सफल दाम्पत्य जीवन बिताउँदैछु ।
सांस्कृतिक भिन्नता, सोचको भिन्नता र विकास आकाश-जमिनको फरक छ उहाँमा र मेरोमा । त्यसैले कहिलेकाहीँ आफ्नो भावना जस्ताको त्यस्तै उहाँलाई भन्न सक्तिनँ । त्यसबेला हामी आँखाको भाका, हात र हाउभाउबाट काम चलाउँछौँ । संसारभरकै लोग्नेस्वास्नीको झगडा हुन्छ र कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुरामा ठस्स्स मस्स्स हुन्छ । त्यस्तो बेलामा म चूप लाग्छु । र, यदि मलाई ज्यादै रिस उठेको छ भने उहाँलाई नेपालीमा मनपर्दी गाली गर्छु उहाँ त्यो बुझ्नु हुन्न, अनि 'आइ डोन्ट अन्डरस्ट्याण्ड हृयाट टु आर सेइङ' भन्नुहुन्छ । त्यसबेला उहाँको माया लाग्छ, बेकारमा भाषै नबुझ्ने मान्छेलाई बिनापत्तामा किन गाली राख्या होला !
अभिनेत्री रोमान्स रोचक सोच फिल्म फेस्टिबल कन्ट्रोभर्सी घोषणा अभिनेता पेज3सञ्चारकर्मी पार्टी क्या बात ! ग्ल्यामर निर्देशक नवीनता कार्यक्रम सेक्स प्रविधि